Kufanana kwema LED mabhuru. Dzidza kusarudza yakanakisa kuchengetedza | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Simba rekuchengetedza, Kumba Economics
Iwe wakanyatsonzwa nezve LED mababu uye kwavo kudzikiswa mumagetsi kushandiswa. Tekinoroji iri kusimukira ichiwedzera uye tinofanirwa kudzidza kuchengetedza zvese musimba rekushandisa uye nemweya watinogadzira mumhepo nekushandisa iri simba. Zvakajairika kuve nekusagadzikana zvishoma pakutanga patinofunga kushandura mwenje wemumba medu maLED. Ose ari Incandescent girobhu racho sezvo kushandiswa kwakaderera kusingaunze mari uye tinofanirwa kuziva mushe kuenzana kwema LED mabhuru kugadzirisa mari zvakanaka.
Muchinyorwa chino ticha tsanangura zvakadzama kuenzana kwemabhuru eLED zvine chekuita nemamwe mabhuru uye isu tichakupa mamwe matipi ekuchengetedza zvimwe pachikwereti.
1 Chinja mababu ekare maLED
2 Kufanana kwema LED mabhuru neakajairika iwo
3 Kubudirira kwemwenje
Chinja mababu ekare maLED
Patinoona bhiri remagetsi mumwedzi yekushandisa zvakanyanya, tinokanda maoko edu kumusoro. Uye ndezvekuti chete muchiedza cheimba tinosuwa pini hombe. Simply ne Nekuchinja magirobhu emba mumba, tinenge tichichengetedza yakawanda. Ichokwadi kuti, pakutanga, vanowanzo dhura kupfuura incandescent kana yakaderera-yekushandisa iwo. Asi imomo ndipo pane mutsauko wehunhu.
Nepo girobhu rakajairika remwenje rinoshandisa yakawanda yesimba raro pakupisa, Ma LED anokwanisa kushanda pakadzika tembiricha. Edza kubata girobhu rinoshanda uye iwe uchaona kuti rinotonhora zvakadii, nepo zvakajairika zvawakapisa. Izvo zvinodikanwa kugadzirisa mamiriro ekuvhenekesa emba kana isu tichida kukwidziridza simba rekushandisa. Kutenga ese mababu atinayo kubva mumba zvakananga kumaLED kunogona kudhura pakutanga (kunyangwe pano iwe une zvipo zvekuvatora zvakachipa). Sezvo akajairwa mababu ane hupenyu hupfupi, iwe zvakapusa isu tinogona kumirira kuti dzigadzwe uye nekudzishandura imwe neimwe.
LED mababu ane mhando iri nani uye anounza akakosha ekuchengetedza mumagetsi kushandiswa. Izvi zvinotibatsira zvakanyanya nekuti isu tinogona kushandisa iyo simba kuchengetedza mune zvimwe zvinhu. Nekudaro, kana zvasvika pakushandisa mababu isu tinozviwana tiine dambudziko re watts. Isu tinofanirwa kuziva kuti ndechipi chakaenzana chemabhuru eLED zvine chekuita nemamwe.
Simba kubva kune imwe mhando yegirobhu kuenda kune imwe rakagadziridzwa uye ikozvino isu tinofanirwa kuziva kuti rakaenzana nei kuitira kuti kushandiswa kwedu kuve kwakaderera. Zvinenge zvisina zvazvinobatsira kushandura girobhu re LED kuchengetedza kana tikatenga nesimba rakakwirira kupfuura rinodiwa.
Kufanana kwema LED mabhuru neakajairika iwo
Chinhu chekutanga uye chikuru chaunofanira kuziva ndechekuti kuburitswa kwechiedza cheaya mababu matsva hakuyerwe mumawatts. Ichi chiero chitsva chinonzi Lumens kana lumens. Iyi nhanho inoedza kutiudza huwandu hwechiedza chinoburitswa nebhuruu kuitira zvinangwa. Iyo inowedzera mwenje iyo girobhu ine, yakanyanya kuwedzera mwenje iyo ichatipa isu. Izvi zvinoita mutsauko mukuru nesimba reakajairwa mababu ehupenyu hwese.
Nekuti mababu eLED anoda simba shoma, anopedzisira ave kuda simba shoma kuvhenekera yakaenzana nzvimbo. Iwo ndiwo anonyanya kushanda uye ecological mababu aripo nhasi. Chii chimwe, ine mukana wekusava nezvinhu zvinosvibisa mukugadzirwa kwayo, senge mercury, kana zvimwewo zvinhu zvine chepfu uye zvine mwaranzi.
Iko kusevha kunogadzirwa nekuda kwekuti haina kukosha kwekugadzira mabhiriji eplasma kana kupisa iyo mercury sezvazvakaita mune neon. Iyo inongotendeuka pakarepo uye haina kutambisa chero risingadiwe simba.
Kufanana kwegirobhu hakufanire kutorwa moyo. Kunyangwe uchiziva hurongwa hwekuyera kwemawatts, zvakakosha kuti uve nechinongedzo chekuti chikamu cheyero hachina kufanana. Mugadziri wega wega ane akateedzana ehunhu avanopa kune icho chigadzirwa uye icho chinosiyana muhuwandu uye mhando yekubuda kwechiedza. Ramba uchifunga kuti Haasi ese akajairwa 40W mababu anoburitsa iyo chaiyo chaiyo huwandu kana kusimba kwechiedza.
Muchiitiko chema LED, watts anongoratidzira mamiriro ekushandisa mukushanda kwegirobhu, asi kwete huwandu hwechiedza chavari kuburitsa.
Chidimbu chekuyera chemwenje chine chekuita nechiyero chechiedza chinoburitswa nebhuru uye iyo simba remagetsi yakapedzwa, inova iyo inopimwa mumawatts. Imwe paramende inozotarisirwa kana uchinge wagadzirisa zvakafanana nemamwe mababu ndiko kuvhenekera. Ndezve izvo lumens pamamirimita mita yakaburitswa nebhuru iri mubvunzo. Kazhinji zvinosiyana zvichienderana nekukwirira kwayakaiswa uye saizi yenzvimbo yatinoda kuvhenekera.
Nebhuruu ye LED ine 5W tinokwanisa kuwana chiyero chakaenzana seyakajairwa girobhu rinosvika 35-40 W. Naizvozvo, simba remagetsi rinoshandiswa uye, mushure mezvose, mutengo watinogadzira unosvika 85% kuderera pane akajairwa mababu.
Izvi zvinogona kutaridzika zvirinani mutafura umo hunhu hunofungidzirwa hwemhando dzakasiyana dzemabhuru, simba ravo uye kugona kuvhenekera zvinounganidzwa. Izvo zvakaenzana zvinogona kusimbiswa neanenge ese marudzi emabhubhu, kubva ku incandescent, kusvika halogen, kuburikidza ne sodium, nezvimwe. Iwo 7W LED mababu akaenzana neyakajairika 60W halogen.
Kana tikawanza kuponesa uku nemagetsi ese emwenje mumba uye nenguva yaari, iko kuchengetedza chinhu chinoshanda chaizvo. Uye zvakare, ivo havaburitse imwe yekuwedzera kupisa (inoyemurwa kwazvo muzhizha) uye ine hupenyu hwakareba hwakareba.
Pano tinokusiira iyo tafura ine zvese zvakakosha zvakaenzana kwaunogona kuenzanisa kuti mangani mawatts eiyo LED girobhu achienzaniswa nemamwe uye zvinopesana. Neiyi nzira, iwe unogona kuiwana chaiyo kana zvasvika pakuchengetedza mwenje wakanaka kumba, kuchengetedza zvakanyanya sezvinobvira.
Ndinovimba ruzivo urwu rwunokubatsira iwe kuti uve nemafungiro akajeka panenyaya iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kufanana kwema LED mabhuru
Rigoberto Ibargüen Fleitas akadaro
Ndapota, ndinoda kuti munditsanangurire kuti nzira yekugadzira magetsi mumagetsi inoshandisa sei zvisaririra zvezvirimwa (nzimbe) kana huni, nezvakanakira nekuipira kushandiswa kwayo.
Pindura Ing. Rigoberto Ibargüen Fleitas
Chii chaungaitira Nyika?
Guta rakatsiga uye kufamba